Talooyinkaan raac si aad u hesho fikrado ganacsi | Somaliska
Talooyinkaan raac si aad u hesho fikrado ganacsi
Muddo ayaad ku riyoonaysay in aad abuurato ganacsi, oo hada waxaa la joogaa xiligaa aad shaqada bilaabi lahayd? Hadaba sidee ku heli kartaa fikrad ganacsi oo faa’iido dhalin karta? Halkaan waxaan idin-kugu soo bandhinaynaa 4 ka mid ah xeeladaha ugu caansan ee aad raaci karto si aad u hesho fikrad wax-ku-ool ah.
1. Xooga saar waxyaabaha aad ku wanaagsantahay – Marka aad ka fikirayso fikrada ganacsiga, waxaad xoogaa saartaa oo baaritaan ku samaysaa waxyaabaha aad adigu qaban karto. Maxaad aqoon ama waayo-aragnimo u leedahay? Maxaad ku wanaagsantahay? Ma jiraan waxyaabo aad khabiir ku tahay? Jawaabaha su’aalahaas ayaa noqon kara fikrad ganacsi oo wanaagsan. Tusaale, haddii aad ku wanaagsantahay cunto-karinta oo qofkasta oo cuntadaada dhadhimayaa uu la dhacayo, waxaad abuuri kartaa maqaaxi. Haddii aad tahay qofka loo waco marka uu baabuur halaabo waxaad furan kartaa garaash. Waxaan filayaa in aad fahantahay muhiimada qodobkaan.
2. Maskaxda ka shaqaysii (Brainstorm) – Nidaamka loo yaqaan Brainstorming waa xeelad ay isticmaalaan koox walba oo doonaysa in ay helaan fikrado cusub. Waxaa la sameeyaa in la ururiyo oo la liis gareeyo fikrado badan oo kala duwan ka dibna qiimeyn lagu sameeyo kuwa ugu wax-tarka-badan. Waxaad samayn kartaa in familkaaga ama asxaabtaada ama cida aad doonayso in ay ganacsi kula abuurto aad wada fariisataan oo aad isticmaashaan xeeladaan.
3. Sameey cilmi-baaris suuq (Market research) – Marka aad isbardhigto fikradaha kala duwan ee aad heshay, talaabada ku xigta waa in aad sameyso baaritaanka-suuqa (market research) taasoo aad ugu kuur-galayso macaamiishaada, shirkadaha kula tartamaya, qiimaha iyo dhamaan waxyaabaha kala duwan ee saameyn kara ganacsigaaga. Waxaa aad u muhiim ah in baaritaankaaga aad ku ogaado inta uu le’egyahay suuqa alaabtaada iyo baahida loo qabo. In aad abuurto ganacsi aan loo baahnayn ama aad soo dejiso alaab aysan cidna xiisaynayn waa qasaare weyn.
4. Wada tashi samee – Talaabada xigta waa in aad heshaa dad kula taliya oo qaasatan khabiir ku ah arinta aad doonayso in aad ganacsiga ka dhigto ama aad hesho dad ganacsato ah oo aan adiga kula tartamayn oo ku siin kara talooyin ku aadan fikradaada cusub iyo sida loo socod-siin karo. Waxaa muhiim ah in fikrada aad u bandhigayso la-taliyayaasha in ay tahay mid si fudud loo fahmi karo isla markaana aad diyaar u noqoto in ay dadkaas ka dhiibtaan aragtiyo kala duwan oo qaarkood aadan jeclaysan doonin.
Waxaan filayaa in aad ka faa’idaysateen mowduucan. Fadlan gaarsii asxaabtaada.
Dad aan DNA laga qaadin oo sharciga loo ogolaaday
Mr Talaabo says:
Talaabadii uugu muhiimsanayd ayaad ILOwday Sxb taasoo ah :-
Ganacsiga waxaa kahoreeya inaad lacag haysato. Marka sidee lacag lagu heala? Mase jirtaa in lacag la amaahiyo qofka ganacsi bilaabaya?
December 19, 2015 at 03:54
Waa runta mr Talaabo lacag la’aan way adagtay bilowga hawleed laakin ka waran adigo lacag haya oo aan garanayn waxaad ku qabato ama wixi aad faiido ku heli lahayd! ? Mararka qaar lacagta fikrada aya ka muhiimsan
December 20, 2015 at 03:49
Sax lkn fikrad wee ka horeysaa lkn muhiimada waa in aad lacag heesataa sxb adigoo fikrad heesta hadina aadan lagac heesan ma soconeyso lkn waa hubaal hadii aad lacag heesato in aadan wey neenin wax fikrad ah sxb Faisal.
marka muhiimada waa in aad 2 isku heesataa hada tusale aniga fikrad ayaa heeyaa in aan wax soo saro lkn lacag ma heesto ma soconeyso sxb qofka beni aadamka hadii uu lacag heesto wax walbo wuu heli karaa inta aananka eheen nafta beni aadamka aha midaa lasoco
waad mahadsan tihiin Somaliska